Ixabiso eliphantsi elizenzekelayo lokuPakisha abaThengisi kunye neFektri | YiZheng
Ngayo "ngokukhawuleza, ngokuchanekileyo, ngokuzinzileyo", umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo inoluhlu olubanzi lokulinganisa kunye nokuchaneka okuphezulu, umdlalo kunye nokuhambisa nokuphakamisa umatshini wokuthunga ukugqibezela inkqubo yokugqibela kumgca wokuvelisa isichumiso sezinto eziphilayo kunye nesichumisi esimbaxa.
Yintoni Umatshini wokuPakisha ngokuzenzekelayo?
Umatshini wokuPakisha weSichumiso usetyenziselwa ukupakisha isichumiso sephepha, esenzelwe ukupakisha izinto ezinobungakanani. Ibandakanya uhlobo lwebhakethi eliphindwe kabini kunye nohlobo lwebhakethi olunye. Umatshini uneempawu zesakhiwo esidibeneyo, ukufakelwa okulula, ukugcinwa ngokulula, kunye nokuchaneka okuphezulu okuphezulu okungaphantsi kwe-0.2%.
Nge "ngokukhawuleza, ngokuchanekileyo nangokuzinzileyo" - kuye kwaba lukhetho lokuqala lokupakisha kwimveliso yemveliso yezichumisi.
1. Ukupakisha okusebenzayo: kulungele ukunitha iingxowa, iingxowa zephepha lesaka, iingxowa zelaphu kunye neeplastiki, njl.
2.Izinto eziphathekayo: I-304 insimbi engenasici isetyenziswe kwindawo yokudibanisa, enokumelana nokubola okukhulu.
Ubume boomatshini bokuPakisha ngokuzenzekelayo
AUmatshini wokupakisha otomatic isizukulwana esitsha somatshini wokupakisha okrelekrele owenziwe yinkampani yethu. Ngokukodwa iqukethe isixhobo sokulinganisa ngokuzenzekelayo, ukuhambisa isixhobo, ukuthunga kunye nokupakisha isixhobo, ulawulo lwekhompyuter kunye nezinye izinto ezine. Imodeli yoluncedo ineenzuzo zesakhiwo esifanelekileyo, inkangeleko entle, ukusebenza okuzinzileyo, ukonga umbane kunye nobunzima obuchanekileyo. Umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo ikwaziwa ngokuba sisikali sokupakisha sekhompyuter, umatshini ophambili usebenzisa ukutya okukhawulezayo, okuphakathi kunye nokucothisa isantya esithathu kunye nesakhiwo sokuxuba esikhethekileyo. Isebenzisa itekhnoloji yokuguqula amaza ombane yedijithali, itekhnoloji yokulungisa isampulu kunye netekhnoloji echasene nokuphazamiseka ukuqonda imbuyekezo yempazamo kunye nokulungiswa.
Ukusetyenziswa koMatshini wokuPakisha ngokuzenzekelayo
1. Iindidi zokutya: iimbewu, umbona, ingqolowa, iimbotyi zesoya, irayisi, i-buckwheat, isesame, njl.
2. Iindidi zesichumisi: amasuntswana okondla, isichumiso sendalo, isichumisi, i-ammonium phosphate, amasuntswana amakhulu e-urea, i-porous ammonium nitrate, isichumisi se-BB, isichumisi se-phosphate, isichumisi sepotash kunye nezinye izichumisi ezixubileyo.
3. Iindidi zeekhemikhali: zePVC, i-PE, i-PP, i-ABS, i-polyethylene, i-polypropylene kunye nezinye izinto eziyimbudumbudu.
4. Iindidi zokutya: ezimhlophe, iswekile, iityiwa, umgubo nezinye iindidi zokutya.
Izinto eziluncedo Zenzekelayo Packaging Machine
(1) Isantya sokupakisha ngokukhawuleza.
(2) Ukuchaneka kobungakanani kungaphantsi kwe-0.2%.
(3) Isakhiwo esidibeneyo, ukugcinwa ngokulula.
(4) Ngomatshini wokuthunga ohambisa uluhlu olubanzi kunye nokuchaneka okuphezulu.
(5) Sebenzisa ii-sensors zokungenisa ngaphakathi kunye nokungenisa ngaphakathi ii-actuator zomoya, ezisebenza ngokuthembekileyo kwaye zigcina ngokulula.
Iimpawu zokuLayisha kunye noMatshini wokuTyisa
1. Inomthamo omkhulu wothutho kunye nomgama othutha ixesha elide.
2. Ukuzinza nokusebenza ngokukuko.
3. Iyunifom kwaye iyaqhubeka ikhupha
4. Ubungakanani be-hopper kunye nemodeli yemoto inokwenziwa ngokwezifiso.
Zenzekelayo Packaging Machine Umboniso wevidiyo
Oluzenzekelayo Packaging Machine Model Ukukhetha
Umzekelo YZBZJ-25F YZBZJ-50F
Ubunzima Range (kg) 5-25 25-50
Ukuchaneka (%) ± 0.2-0.5 ± 0.2-0.5
Isantya (ingxowa / iyure) Ngama-500-800 300-600
Amandla (v / kw) 380 / 0.37 380 / 0.37
Ubunzima (kg) 200 200
Ubungakanani obukhulu (mm) 850 × 630 × 1840 850 × 630 × 1840
Egqithileyo Ukulayisha kunye noMatshini wokuTyisa
Okulandelayo: Umatshini wokuPakisha oPhindayo oBini
Intshayelelo Yintoni isihlunu sokukhupha isihlukanisi esiqinileyo solwelo? I-Screw Extrusion Solid-liquid Separator sisixhobo esitsha sokuhambisa amanzi esiphuhliswe ngokubhekisa kwizixhobo ezahlukeneyo zokuhambisa amanzi ekhaya nakumazwe aphesheya kunye nokudibanisa i-R & D kunye namava okuvelisa. Iscrew extrusion Solid-ulwelo Separato ...
Intshayelelo Usetyenziselwa ntoni uMatshini wokuDibanisa iDiski yeDiski? Umatshini wokuDibanisa iDiskhi ekwabizwa ngokuba yi-disc feeder. Izibuko lokukhutshwa linokulawulwa ngokuguqukayo kwaye ubungakanani bokukhutshwa bunokuhlengahlengiswa ngokwemfuno yokwenyani yemveliso. Kumgca wemveliso yemveliso yesichumiso, iVertical Disc Mixin ...